တစ်ကောင်တည်း …. ဒါပေမယ့် ခြင်္သေ့။ | မာသင်
တစ်ကောင်တည်း …. ဒါပေမယ့် ခြင်္သေ့။
နို့ဆီဗူး တော့ နို့ဆီဗူးပဲ။ ဒါပေမယ့် သာမာန် နို့ဆီဗူး တော့မဟုတ်ဘူး။
ရှားပါးမှု ဆိုတာ တန်ဖိုးထားမှု ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။
အမြဲတမ်းရနေရင် .. တန်ဖိုးထားမှု လျော့လာတယ်။
ကိုယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ မကြာမကြာ ကန့်သတ်မှုလေးတွေလုပ်ပြီး ရှားပါးစေပါ။
Limited edition ဆိုတာ ရောင်းအားကောင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။